असार पन्ध्रमा दही चिउराः कर्मकाण्ड कि अर्थपूर्ण ?
आइतवार, असार १५, २०७६ सेतोखरी
असार पन्ध्र । मध्य वर्षायाम । अर्थात दही-चिउरा खाने दिन । असार पन्ध्रमा सबैले चिउराको व्यवस्था गर्छन्, दहीको जोहो गर्छन् । यसमा कतिले मौसमी फल आँपको स्वाद मिसाउँछन्, कतिपयले केरा । घर-घरमा दही चिउरा खाइन्छ ।
सबैलाई थाहा छ, असार पन्ध्रमा दही-चिउरा खानुपर्छ । तर, कतिपयलाई थाहा नहोला, किन दही-चिउरा खानुपर्छ ? दही-चिउरा खानु परम्परा हो । तर, यो परम्परा अर्थपूर्ण पनि छ । असार पन्ध्रमै किन दही चिउरा खाने प्रचलन चलाइयो ? यसको महत्व के होला ?
मानो खाएर मुरी उब्जाउने सिजन
हाम्रो मुलुक कृषिमा आधारित छ । धेरैजसोको जीवन खेतीकिसानीमा बित्ने गर्छ । धेरैजसोले पशुपालन गर्छन्, अन्नवाली लगाउँछन् । अतः असार-साउन अर्थात वर्षायाम भनेको खेतीबाली लागाउने मध्य सिजन । यतिबेला धान लगायत अन्नबाली लगाउने गरिन्छ । अन्नवाली लगाउनका लागि यो नै अनुकुल सिजन हो ।
खेतीपातीमा खटिने किसानहरुलाई यतिबेला भ्याइनभ्याई हुन्छ । किसानहरु दिनभर माटोमा खेल्छन्, हिलोमा खेल्छन्, मलखाँद तयार गर्छन्, अन्नबाली लगाउँछन् । बिहानदेखि साँझसम्म उनीहरु काममा खटिन्छन् । त्यसैले त असारलाई ‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने सिजन’ भनिन्छ । अर्थात यो आयआर्जनको स्रोत बढाउने मेलो पनि हो । थोरै खाएर धेरै काम गर्ने बेला हो । वास्तवमा भन्ने हो भने किसानहरुलाई फुर्सदले खाने समय पनि हुँदैन यतिबेला ।
कामको चटारो हुने भएकाले यतिबेला किसानहरुका लागि छिटोमिठो खाजा हो, दही-चिउरा । दही-चिउरा तयारी परिकार हुन् । यसलाई पकाइरहनु पर्दैन । दही चिउरा बनाउन समय लाग्दैन । त्यसैले काममो हतारोबीच दही चिउरा उपयुक्त हुन्छ, नास्ताको लागि । दही चिउरा मिठो पनि हुन्छ । सर्बपि्रय परिकार हो यो ।
वर्षायाममा दही चिउरा सेवन गर्नुको सम्बन्ध स्वास्थ्यसँग पनि छ । वर्षायाममा खानेकुराको माध्यामबाट संक्रमण सर्ने भय हुन्छ । यतिबेला झिंगा, लामखुट्टे, साङ्ला आदिले खानेकुरा दुषित बनाउन सक्छ । यसैगरी गर्मीले गर्दा चाडै सड्ने, गल्ने हुन्छ । त्यसैले पकाएको वा पकाएर राखेको खानेकुराले पेटमा संक्रमण हुने, अपच हुने संभावना रहन्छ ।
दही-चिउरामा त्यस्तो संक्रमणको भय हुँदैन । यसलाई पकाउन नपर्ने भएकाले छिटो हुन्छ, बनाउन सजिलो र छरितो हुन्छ । स्वस्थ्यवर्द्धक पनि हुन्छ ।
सीतल र सुपाच्य खानेकुरा
दही पाचन यन्त्रका लागि निकै उपयोगी पेय मानिन्छ । दहीमा भएका व्याक्टेरियाले पाचन पक्रियामा सघाउ पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी गर्मीमा यो पेयले शरीरलाई सितलता प्रदान गर्छ ।
त्यसो त दहीमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन बि, सि हुन्छ, यसले शरीरलाई फुर्तिलो बनाइराख्न सहयोग गर्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने दही स्वादिलो पेय मात्र नभएर औषधी पनि हो ।
चिउरा स्वास्थ्यवर्द्धक खानेकुरा हो । यो सड्ने, गल्ने, बासी नहुने भएकाले कुनैपनि किसिमको संक्रमण हुँदैन । चिउरा र दहीको समिश्रण स्वादिलो हुन्छ साथसाथै सुपाच्य पनि ।
कर्मकाण्ड मात्रै ?
दही चिउरा खेतीबालीमा मात्र खाने परिकार होइन । साथसाथै असार पन्ध्रमा मात्र खाने परिकार पनि होइन । दही चिउरा वर्षायामको खाजा हो ।
वर्षायाममा अरु खानेकुरा सड्ने, गल्ने, बासी हुने भएकाले दही-चिउरा उपयोगी मानिन्छ । छिटो, छरितो, मिठो र सुपाच्य खानेकुरा भएकाले दही चिउरा यतिबेला हाम्रो शरीरका लागि उपयोगी हुन्छ । त्यसैले असार पन्ध्रमा मात्र दही-चिउरा खानु, तामझाम गर्नुको अर्थ छैन । बरु, दही चिउरालाई वर्षायामको नियमित नास्ता बनाएमा त्यसले स्वास्थ्य लाभ मिल्नेछ । आफ्ना बालबच्चालाई जंकफूड होइन, दही चिउरामा बानी पारौं ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, असार १५, २०७६, ०५:०६:००
कम्दीमा स्वास्थ्य चौकी भवन उद्घाटन
डुडुवामा स्वास्थ्य सेवाका बारे छलफल
उपचार बापतको रकम तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बास
कागजको झोला पनि हानिकारक
मगलवार, कार्तिक १९, २०७६ सेतोखरी
प्लास्टिकको साटो कागज र सूतीबाट बनेको झोला वातावरणका लागि राम्रो हुने बताइएपनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यी झोला पनि वातावरणीय हिसाबले ठीक छैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
‘ईपोफिट’ अभावले मृगौला विरामी समस्यामा भेरीमा बिग्रेका मेशिन बनाउन अस्पताल उदासिन, दर्जन विरामी प्रभावीत
आइतवार, कार्तिक १७, २०७६ सेतोखरी
बाँकेको नेपालगन्जमा मृगौला विरामीका लागि प्रयोग गरिने ईपोफिट इन्जेक्सनको अभाव देखिएको छ । यसले डायलासिसका लागि भेरी अस्पतालमा आउने विरामी उक्त ईन्जेक्सन लगाउँनबाट बञ्चित भएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्